Fotoana fohy taorian'ny Adobe MAX, ireo fiasa vaovao roa ho an'ny Illustrator sy Fresco | Famoronana an-tserasera
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy lasa izay dia nandroso ny sasany amin'ireo vaovao ho hitanay amin'ny programa Adobe izahay. Mikasika roa ny anio inona no vaovao amin'ny Adobe Illustrator sy Adobe Fresco.
Efa nilaza izany taminareo izahay fiasa fanitsiana loko vaovao, ary anio isika mandeha any amin'ny vaovao hafa izahay eo am-piandrasana ny herinandro ho avy amin'ny Adobe MAX.
sary handray ny Recolor Artwork tsy ho ela. Azontsika atao ny mahita tsara ny fomba fiasan'ity Adobe Illustrator vaovao ity amin'ny horonan-tsary zarainay etsy ambany. Fampiasana vaovao ahafahantsika mamoaka avy hatrany ireo loko avy amin'ny lamina na sary rehetra mba hahafahantsika mampihatra azy ireo amin'ny endriny iasantsika.
Afaka mahita tsara ianao ao amin'ilay horonan-tsary ny fomba hisafidianana teti-doko ary ampiharina mivantana amin'ny asa iray ka mila ny loko rehetra. Tsotra sy haingana mba hanavotana fotoana.
Ho an'ny Adobe Fresco dia afaka mandeha isika miomana amin'ny fampidirana endritsoratra ary namorona sary an-tsaina sary mihetsika hafa. Ahitana fidirana vaovao amin'ny menio endri-tsoratra sy ny safidy hikarohana endri-tsoratra amin'ny alàlan'ny marika. Raha ny tena izy, ao Freco dia azontsika atao manokana ny manaingo ireo endritsoratra mba hanome azy ireo ny mikasika azy manokana. Horonantsary iray hafa hahazoana hevitra tsara momba ny zavatra hitranga amin'ny Fresco; ny fampiharana izay efa ananantsika ao amin'ny Windows hatramin'ny fahavaratra lasa teo.
ankehitriny Azonao atao ny manonona anao amin'ny Adobe MAX mandritra ny herinandro ho avy ary miaraka amin'ireto topi-maso mialoha ireto dia efa nampianarinay anao kely momba ny zavatra hanananay ho fanavaozana manan-danja ho an'ireo fandaharana ankafizinay ho an'ny famolavolana. Ankehitriny, faharetana kely talohan'ireo andro ireo tamin'ny anarana malaza tamin'ny famolavolana sary, mpanakanto ary maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Seho vaovao roa ho avy tsy ho ela amin'ny Adobe Illustrator sy Adobe Fresco